सार्वजनिक शौचालयको ढोकामा तल्लोपट्टि किन राखिन्छ एकहातजति खुल्ला ?
Monday, 27 Nov, 2017 1:43 PM
घरबाहिर हिँड्दा सार्वजनिक शौचालयमा शौच त पक्कै गर्नुभएकै होला । याद गर्नुभएको छ, प्रायः सार्वजनिक शौचालयको ढोकाको तल्लो भागमा केही खाली छोडिएको हुन्छ नि ? मल, फिल्म हल, पार्कलगायत शौचालयमा यस्तो गरिएको हुन्छ । तर, ढोकामा तल्लोपट्टि दुई एक हातजति खाली किन राखियो होला ? यसको तात्पर्य थाहा छैन भने अब जान्नुहोस् :
१. सार्वजनिक (प्रायः पार्क तथा बगैंचा)मा भएको शौचालयमा जोडीहरु अनैतिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन सक्छन् । सँगै शौचालय प्रवेश गरेर यौन कृयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । त्यसैले यस्तो गतिबिधी नहोस् भनेर सार्वजनिक शौचालयको ढोकाको तल्लो भागमा खुल्ला राखिएको हुन्छ ।
२. त्यसो त सार्वजनिक शौचालयमा यौनजन्य क्रियाकलापबाहेक गलत गतिबिधि पनि हुन्छन् । जस्तैः लागूऔषध सेवन, जाँडरक्सी पिउने आदि । यस्ता गतिबिधि नहुन् भनेर पनि ढोकामुनी खाली राखिन्छ ।
३. बच्चाहरु निकै नै चकचके स्वभावका हुन्छन् । जहाँ, जतिबेला पनि आपतकालिन अवस्था सिर्जना गरिदिन सक्छन् । केटाकेटी शौचालयमा छिरेर खेल्दाखेल्दै चुकुल लगाइदियो भने त बित्यास नै पर्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चालाई सजिलै बाहिर निकाल्न सकियोस् भनेर सार्वजनिक शौचालयको ढोकामुनी खाली ठाउँ राखिएको हुन्छ ।
४. ठूलै मान्छे पनि शौचालयमा रहँदारहँदै बेहोस हुन सक्छ । यस्तो अवस्था निम्तिए ढोका मुनीको खाली भागबाट सजिलै निकालेर बचाउन सकिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पाँचौं पटक जन्ती बनेर नेपाल भ्रमणमा आउँदै
दशैका जम्मा भएको पैसालाई बचत गर्न विज्ञहरुको सुझाव
नेकपामा स्थानीयस्तरसम्मको पार्टी एकीकरणका लागि अलमल
आज टीका लगाएर विजया दशमी मनाइँदै, विजयादशमीको साइत ०९ः५१ मा